PUNTLAND OO BAARLAMANKA HOR-GEYSAY U TARTAMAYAASHA AQALKA SARRE EE SOOMAALIYA - BAARGAAL.NET
PUNTLAND OO BAARLAMANKA HOR-GEYSAY U TARTAMAYAASHA AQALKA SARRE EE SOOMAALIYA
✔ Admin on October 16, 2016
Golaha Wakiilada Dawlada Puntland ayaa maanta shaaciyay liiska magacyada musharaxiinta Puntland ugu tartamaysa aqalka sarre ee Baarlamanka Dowlada Federalka Soomaaliya, Waxaana ka muuqda liiska maanta laga hor shaaciyay gollaha wakiilada Puntland qoondo wanaagsan oo Puntland ay ka siisay Haweenka ka dib markii maalmo ka hor beesha caalamka iyo guddiga doorashada Soomaaliya dib ugu celiyeen Puntland, Jubaland iyo Galmudug.
Waxaa ka maqan Guddoomiye ku xigeenkii Baarlamaanka Dowlada Federalka Mahad Cabdala Cawad oo horay ugu jiray xubnaha la tartamayay Jenaraal Moorgan.
Liiskan cusub oo uu soo saaray Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ka hor intii aanu ka dhoofin Garowe ayaa waxaa ka dhex muuqanaya xubno cusub oo isuguy jira siyaasiin iyo Haween ku cusub Saaxadda Siyaasadda.
Akhriso magacyadda loo soo xulay musharaxiinta Puntland ugu tartamaysa Aqalka Sarre ee Baarlamanka Soomaaliya
1-Saynab Xaashi Biixi.
2-Hodon Maxamuud Cismaan.
3-Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
4-Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole.
5-Siciido Xassan Cismaan.
6-Cabdirisaaq Xassan Cismaan Juurile.
7-Maxamuud Axmed Maxamuud.
8-Maxamed Siciid Xirsi’’Moorgan’’.
9-Cabdixakiin Axmed Xaashi.
10-Cali Ismaaciil Cabdi Giir.
11-Cabdisalaan Xaaji Maxamuud Dheere.